मुत्रनलीको संक्रमण र सावधानी, यौन सम्पर्कपछि मुत्र त्याग आवश्यक – Sanchar Patrika
मुत्रनलीको संक्रमण र सावधानी, यौन सम्पर्कपछि मुत्र त्याग आवश्यक
September 19, 2020 279
लामो समय पिसाब रोक्दा, सरसफाईमा ध्यान नदिदा मुत्रनलीमा असर पुग्न सक्छ । खासगरी महिलाहरु पिसाब सम्बन्धी समस्याले बढी सताउने गरेको पाइन्छ । यद्यपि यस्तो समस्या पुरुष, बालबच्चा सबैमा हुनसक्छ ।मुत्रनलीको संक्रमण भएमा केही साझा लक्षण देखापर्छ । जस्तो, मुत्र त्यागको समयमा जलन हुनु, पटक–पटक पिसाव आइरहनु, पिठ्युमा दुखाई महसुष हुनु । त्यसैगरी पिसाबमा गन्ध आउनु, कतिपय अवस्थामा रगत आउनु ।
पिसाब रोकेर राख्नाले मुत्रथैलीमा त्यसले असर गर्छ । मुत्रथैली सुनिन्छ । यसले गर्दा पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या हुन्छ । पिसाब रोक्दा तयसको दबाव मृगौलामा पर्छ । यसैले गर्दा मृगौलाको रोग लाग्न सक्छ ।लामो समय पिसाब रोक्दा पिसाबको रंग गाढा पहेंलो र दुर्घन्धित हुन्छ । ब्याक्टेरियाको कारण यस्तो भएको हो । पिसाब रोक्नाले मुत्रथैली फुलिन्छ । यसले गर्दा मुत्रथैलीको छाला कमजोर हुन्छ । साथै दुखाई पनि सुरु हुन्छ ।
पिसाब चुहिने समस्या आफैमा कुनै रोग नभएर रोगका लक्षण हुनसक्छ । विभिन्न शारीरीक समस्या, औषधि सेवन लगायतका कारण पनि यो समस्या आउँछ ।गर्भावस्था, प्रसव व्यथा, रजनोवृत्ति लगायत अन्य शारीरिक समस्याका कारण महिलामा तनावको समस्या धेरै हुने गर्दछ । यसैले समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैगरी पुरुषहरुमा हुने पुरुष ग्रन्थीको समस्याका कारण पिसाब सम्बन्धि विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । जसले पिसाब अनियन्त्रित हुने तथा पिसाब चुहिने समस्या निम्तने गर्दछ ।बढ्दो उमेरसँगै पिसाब नली कमजोर हुने गर्दछ । त्यस्तै, पिसाब थैली खुम्चनुका साथै पिसाब संग्रह गर्ने क्षमतामा समेत कमी आउने गर्दछ । जसका कारण पिसाब चुहिने वा पिसाब नियन्त्रण नहुने समस्या हुन्छ ।मोटोपनाका कारण पिसाब नली तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा दवाव सिर्जना हुने गर्दछ । जसका कारण पिसाब नली कमजोर भई खोक्दा वा हाडिउ गर्दा समेत पिसाब चुहिने गर्दछ । न्युरोलोजिक रोग तथा मधुमेह लगायतको रोगले पनि पिसाब नरोकिने समस्याको जोखिम बढाउने गर्छ ।
Prevलामो दुरीका सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
Nextविवाहमा अझैपनि दुनियाँ चकित हुने परम्परा रहेको यो समुदायका बारेमा जान्नुभएको छ ?
पत्रकार ले २५ लाख सहित अर्काको नवबिवाहित श्रीमती भगाए ! झापामा के भयो यस्तो काण्ड!
म्यानेजरलाई खुशी पार्न कुटपिट गरेको आरोपीको बयान
यस्ता व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् भटमास, हुनसक्छ नसोचेको असर